Saripika misy vokany maro loko amin'ny Photoshop mora sy haingana | Famoronana an-tserasera
Saripika miaraka amin'i vokatra maro loko amin'ny Photoshop haingana sy mora, ka nahatratrarana vokatra mahaliana sy tena manintona eo amin'ny sehatry ny fahitana noho ny hery avoakan'ny loko isan-karazany azontsika tamin'ny alàlan'ity vokatra ity. Ity vokatra ity dia azo ampiasaina amin'ny karazana sary rehetra tadiavinay hanasongadinana izany mikasika ny majika sy ny nofinofy.
Photoshop no lehibe majika fametahana sary Par excellence mamela antsika hahatratra ny karazana effets rehetra ho an'ny sarinay, tsy misy isalasalana fa ilay programa izay manome antsika ny mety indrindra amin'ny tontolon'ny famerenana sary. Amin'ity tranga ity dia ho hitantsika a pastiche loko amin'ny endrika madio Alice amin'ny Wonderland.
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika hahazoana izany vokany mahaliana dia ny fananana sary ahafahantsika mampihatra ny famerenana sary. Azontsika atao ny mampiasa sary rehetra, amin'ity lahatsoratra nampiasa lolo izahay fa azo atao koa ny mampiditra ny vokany amin'ny sarin'olombelona.
1 VOKANY MULTICOLOR
1.1 Mamorona sosona fanitsiana hue saturation
1.2 Makà valiny maro loko
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia sokafy ny sary eto Photoshop, Manaraka izany dia hanomboka hamorona sosona fanitsiana feo mahasalama hanova ny lokon'ny sarinay isaky ny sosona izahay, io no fitaovana lehibe hampiasainay hahatratrarana izany vokatra izany.
Mamorona sosona fanitsiana hue saturation
Ny vokany dia azo indrindra amin'ny alàlan'ny fampiharana fanitsiana sosona hue saturationAmin'ity fametrahana ity dia hahazo ny lokony tsirairay isika. Tsindrio ny sosona sary ary safidio ny sosona fanitsiana ny tonon'ny saturation, aorian'ny fanaovana izany dia hisokatra ny menio miaraka amin'ny karazany masontsivana azo ovaina ho an'ny loko. Izahay dia manitsy ny loko araka ny itiavantsika azy ary mamorona sosona fanitsiana hafa amin'ny loko hafa.
Mamorona tsikelikely isika samy hafa fanitsiana sosona misy loko maro samihafa.
Araka ny hitantsika, ny tsirairay amin'ireo sosona fanitsiana dia manana loko sy anarana samy hafa, mety tsara izany miasa milamina foana mba tsy ho very eo amin'ireo sosona maro be. Afaka apetaho ny loko rehetra tadiavinay, amin'ity tranga ity dia nampiasaina ohatra ny sasany.
Makà valiny maro loko
Ny dingana manaraka sy farany dia ny manomboka hamafa ny ampahany amin'ny sosona tsirairay mba hahitana ny sosona ambany kokoa hahatratrarana izany valiny maro loko.
Alohan'ny hanombohana ny idealy dia ovay ny masontsivana borosy: opacity, mikoriana, habe ary hamafin'ny.
Isika tsirairay dia mamafa ny ampahany amin'ny sosona tsirairay mba hanaovana izany tsindrio ny sosona fanitsiana (kianja fotsy) manova sosona isika ary manao ny dingana mitovy amin'izany. Raha nandeha tsara ny zava-drehetra dia tokony hisy vokany izany sary maro loko.
Io vokany io azo atao amin'ny fomba samihafaAmin'ity tranga ity dia hitantsika ity dingana ity hifehezana kely kokoa ireo sosona fanitsiana sy ireo fahafahan-dry zareo mamela antsika hiasa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Tutorials » Saripika misy vokany maro loko amin'ny Photoshop
Teboka an-tapitrisany maro hahasarika ny natiora mahafinaritra